သင်၏ GNU / Linux ကို Software Development အတွက်သင့်တော်သော Distro အဖြစ်ပြောင်းပါ Linux မှ
သင်၏ GNU / Linux ကို Software Development အတွက်သင့်တော်သော Distro တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းပါ
လောလောဆယ် Linux သည် Information Technology (IT) Specialရိယာတွင်အထူးကျွမ်းကျင်သူများအသုံးပြုသော Operating Systems အဆင့်တွင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဆာဗာများသို့မဟုတ်ဆာဗာအုပ်ချုပ်သူများအဖွဲ့များနှင့်ယခုနှစ်ဆော့ဝဲလ်တီထွင်သူများအဆင့်တွင်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရတူညီသောအဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည် Stack Overflow Developer စစ်တမ်း 2016 del ၂၁.၇% ဖြင့်တတိယနေရာ အားဖြင့် Developer အကြိုက်ဆုံးအဖြစ် ၂၁.၇% ဖြင့်တတိယနေရာ ထဲမှာ Stack Overflow Developer စစ်တမ်း 2018.
လတ်တလောတွင် GNU / Linux Applications Ecosystem တွင် Software Development (Applications and Systems) အတွက်အလွန်ကောင်းသောအစီအစဉ်များရှိသည်။ GNU / Linux Distribution တွင်ကောင်းမွန်စွာထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းသည်ပရိုဂရမ်ဘာသာစကားများ၏ဖြစ်နိုင်ချေများစွာကိုလွှမ်းခြုံနိုင်သည်။
2.1 Terminal အယ်ဒီတာများ
2.2 Graphical Interface ဖြင့်ရိုးရှင်းသောအယ်ဒီတာများ
2.3 ဂရပ်ဖစ် Interface ကိုအတူအဆင့်မြင့်အယ်ဒီတာများ
6 Distros (GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း)
ကျွန်ုပ်တို့နောက်ပိုင်းတွင်လေ့လာမည့် GNU / Linux အတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်များစာရင်းသည်ယခုဤ Operating System ၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနယ်ပယ်တွင်လူသိအများဆုံးနှင့်အသုံးပြုမှုအချို့သာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုမကြာခဏမွမ်းမံပြီးကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့ရှိသည်။
ထို့အပြင်မကြာခဏ application အသစ်များထွက်ပေါ်လာပြီသို့မဟုတ်လက်ရှိ application အသစ်များကိုကမ္ဘာနှင့် Microsoft သို့ပေါင်းစည်းလိုက်သည်GNU / Linux အောက်တွင်ထုတ်လုပ်နိုင်သော application များ၏အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ခြင်း။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောအရာများပြုလုပ်ခဲ့သည် ဘာသာရပ်အပေါ်ထုတ်ဝေ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်မှတ်မိခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ရကျိုးနပ်ဖြစ်ကြသည် Ubuntu ကိုပြင်ဆင်ပါ (သို့မဟုတ်အခြား distro) web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် y ကျွန်ုပ်၏ကိရိယာများ GNU / Linux နှင့်အတူ Web Development နှင့် Design များအတွက်။ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့နှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုများပြုလုပ်ပေးပြီးဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အသင့်တော်ဆုံးရရှိနိုင်သည့် Distros များကိုပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။
Software Development အတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်များသည် GNU / Linux ထက်အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များစွာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည် အတွေ့အကြုံရှိ Software Developer ကိုဤ Operating System တွင်အကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး ၄ င်းကိုသူတို့၏အဓိက Operating System အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ရန်လိုအပ်သောအထောက်အပံ့ (အခြေခံ) ကိုခွင့်ပြုခြင်း။
GNU / Linux ပေါ်တွင်ဆော့ဗ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးမှု - အယ်ဒီတာများ၊ IDE များနှင့် Distros
ဒီနေရာမှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အရာဖြစ်တယ် Software Development နယ်ပယ်ရှိ GNU / Linux World ။
စာသားတည်းဖြတ်သူဆိုသည်မှာစာသားဖိုင်များသို့မဟုတ်သာမန်စာသားဟုလူသိများသောစာသားသက်သက်သာသာဖြင့်ရေးဆွဲထားသောဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိုင်များကိုဖန်တီးရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်စာသားတည်းဖြတ်သူများသည်အဆင့်မြင့်ပြီးဖိုင်အတွင်း၌၎င်းနှင့်နားလည်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်စာသားအတွင်းတွင်အသုံးပြုသောပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားကိုဖော်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်လွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းတို့ပါရှိသည်။ အချို့သည် Terminal ဖြစ်နိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ graphical interface မရှိဘဲအခြားသူများမှာ graphical interface ဖြင့် Desktop ဖြစ်နိုင်သည်။
GNU / Linux တွင်လူသိအများဆုံးနှင့်အသုံးပြုသောသူတို့တွင် -
Graphical Interface ဖြင့်ရိုးရှင်းသောအယ်ဒီတာများ
ဂရပ်ဖစ် Interface ကိုအတူအဆင့်မြင့်အယ်ဒီတာများ
အင်္ဂလိပ်အမည် "Integrated Development Environment" မှ IDE အတိုကောက်အားဖြင့်အများအားဖြင့်လူသိများသော Integrated Programming Environment သည်အခြားတစ်ခုထက်ပိုသည်။ အများအားဖြင့် code editor, compiler, debugger နှင့် graphical interface builder တို့ဖြင့်အများအားဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသော program တစ်ခုသို့မဟုတ် application တစ်ခုဖြစ်သည်။ IDE များသည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် application များဖြစ်နိူင်သည်။ သို့မဟုတ်၎င်းတို့သည်ရှိပြီးသား application များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
English Development "Software Development Kit" မှအတိုကောက် SDK မှလူသိများသော Software Development Kit ။ ၎င်းသည် Software Developer ကိုနည်းပညာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအတွက်လုပ်ငန်းကိုခွင့်ပြုခြင်းနှင့်လွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းအတွက် Application များနှင့်စနစ်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်ကူညီသောကိရိယာများသာဖြစ်သည်။.
SDK တစ်ခုအတွင်း၌တည်ဆောက်ထားသော application များသည် operating system, hardware platform, video game console သို့မဟုတ်အထူး software package များအတွက်သာဖြစ်သည်။ SDK တစ်ခုပါ ၀ င်နိုင်သောအရင်းအမြစ်များစွာရှိပါသည်။
လျှောက်လွှာပရိုဂရမ်းမင်း interface ကို (API).
ပေါင်းစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပတ်ဝန်းကျင် (SDI) နှင့် Debugger နှင့်က Compiler ။
Un emulator လိုအပ်သောနည်းပညာပတ်ဝန်းကျင်၏။
ဗားရှင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ် (သို့မဟုတ်ပြန်လည်တည်းဖြတ်ခြင်းထိန်းချုပ်စနစ်) သည်စီမံကိန်းဖိုင်များသို့ပြောင်းလဲမှုများကိုခြေရာခံရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်နည်းပညာနှင့်အလေ့အကျင့်များပေါင်းစပ်ထားသည်အထူးသဖြင့်အရင်းအမြစ်ကုဒ်၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဝဘ်စာမျက်နှာများ။
ဗားရှင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားလုံးသည်စနစ်ဖြင့်စီမံခန့်ခွဲသောသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းသည့် repository ရှိခြင်းကိုအခြေခံသည်။ ဒီ repository မှာစီမံခန့်ခွဲထားသောပစ္စည်းများ၏ဗားရှင်းသမိုင်းပါရှိသည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး စီသည်သိမ်းဆည်းထားသည့်အကြောင်းအရာကို၎င်းကိုအသုံးပြုရန်မိတ္တူပွားခြင်းအားဖြင့်ဒေသခံမိတ္တူတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲသို့မဟုတ်သမိုင်း၌သိမ်းဆည်းထားသောမည်သည့်ဗားရှင်းကိုမဆိုမိတ္တူပွားနိုင်သည်။
မှတ်စု: ၎င်းတို့အနက် Git သည်၎င်း၏ကြီးမားသောအသိုင်းအဝိုင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ကျယ်ပြန့်သော plugins များနှင့် graphical Clients များအတွက်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ Git graphical clients များအကြောင်းပိုမိုသိလိုပါက၎င်း၏တရားဝင်စာမျက်နှာမှဤ link သို့သွားပါ။ Linux ပေါ်ရှိ Git အတွက်ဂရပ်ဖစ်ဖောက်သည်များ.
Distros (GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း)
Free Operating System ကို Linux Kernel နှင့် GNU applications များမှဖန်တီးထားသည် ၎င်းသည်၎င်း၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်အခြားဆော့ဝဲလ်များတပ်ဆင်ရန်အတွက်အထုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များအတွက်ကိရိယာများမှတစ်ဆင့်၎င်းကိုအလွယ်တကူထည့်သွင်းရန်တိုးတက်မှုများကိုပေးသည်။ ဖြန့်ဖြူးမှုရွေးချယ်မှုသည်အသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်အရသာပေါ်မူတည်သည်။
Software Developer အဆင့်တွင်အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည်။
Distro MinerOS GNU / Linux ဗားရှင်း ၁.၁ ကိုမကြာမီဖြန့်ချိမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ရုံး၊ ရုံး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောဗားရှင်း ၁.၀ နှင့်မတူသည်မှာ၊ ၎င်းသည်ဆော့ဝဲလ်တီထွင်သူများ၊ ကစားသမားများနှင့်မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးသူများအတွက်အထူးဖြစ်လိမ့်မည်။ Distro မူကွဲ၏အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၎င်း၏အမည်ကိုနှိပ်ပါ။ MinerOS GNU / Linux ၁.၁ (Onix) သို့မဟုတ်လက်ရှိအကြောင်းကို MinerOS GNU / Linux 1.0 (ပက်ထရို).
ယခုဤစာအုပ်သည်သင်တို့အတွက်အလွန်အသုံးဝင်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်သင်၏ဆော့ဖ်ဝဲ developer များနှင့်သင့်တော်အောင်ပြုလုပ်ရန်သင်၏ Distro တွင် application အမြောက်အများကို install လုပ်ရန် (သို့) ၎င်းတို့အတွက်အကြံပြုထားသော application ကိုသုံးရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ လာမယ့်ပို့စ်အထိ!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » သင်၏ GNU / Linux ကို Software Development အတွက်သင့်တော်သော Distro တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းပါ
juliuco နီကီလာဒို ဟုသူကပြောသည်
ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထံမှ, tas sembrao
juliuco nikelado အားပြန်ကြားပါ
ဆောင်းပါးသည်အလွန်ကောင်းသော်လည်းပထမစာပိုဒ်၏ဒုတိယအပိုင်းကိုကျွန်ုပ်သဘောမတူပါ။ GNU / Linux သည် developer များအတွက်ဘုရင်ဖြစ်လာရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလမ်းကြောင်းရှိသည်။ တကယ်တော့ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်၎င်းသည်တိုးတက်လာစေသည့်အားသာချက်များအားလုံးအတွက်၎င်းကိုတိတိကျကျအသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်အခမဲ့ပုံစံ။
အတိုချုပ်အားဖြင့် - ငါ vim ကို +60 plugins များဖြင့်အသုံးပြုသည်။ 1400-line configuration file ဖြင့်ငါ VimL တွင်ပရိုဂရမ်လုပ်ထားသော function များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းကို tmux multiplexer နှင့်အတူအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့် Unix ဂေဟစနစ်၏ grep, sed, awk, … git အပြင် gim အပြင် vim ကိုအသုံးပြုရန် terminal ကို multiplexing ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ Terminal မှ၊ ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများ၊ နာမည်ပြောင်များနှင့်ကောင်းမွန်စွာပြုပြင်ထားသည့်အရာများပါဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ vim, my tmux, zsh (alternate shell to bash) နှင့်အခြားပရိုဂရမ်များ၏ configurations github ပေါ်ရှိအများပြည်သူဆိုင်ရာ repo တွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် upload လုပ်နေကြသည်။ သန့်ရှင်းသော GNU / Linux တပ်ဆင်မှုတိုင်းအတွက် git clone ဖြင့်ပုံတူကူးယူပြီး symlink များကို stow ဖြင့်ဖန်တီးရမည်။ ငါ၌နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် Unix-based system ရှိမည်သည့်စက်ကိုမဆိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ရန်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သည် (ဟုတ်ကဲ့၊ Mac တွင်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါ) ။
ကျွန်ုပ်သည် .Net နှင့် Windows ၏ operating system တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတူယှဉ်တွဲတည်ရှိနေသောမည်သည့်နည်းစနစ်မျိုးတွင်မဆိုကျွန်ုပ်သည်ပရိုဂရမ်းမင်းကိုရည်စူးထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းထင်ရှားပါသည်။ အကယ်၍ Java ကိုပရိုဂရမ်ပြုမည်ဆိုပါက၎င်းသည်သင်ဖော်ပြမထားသောကောင်းမွန်သော IDE တစ်ခုကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ JetBrains မှပေးသောသူများသည်၎င်းတို့ကိုဖော်ပြရန်အကြောင်းမရှိပါ။
PS: ကျွန်ုပ်သည် C / C ++, Go, Python နှင့် Perl တို့တွင်ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် Basic, Bash, Lisp, eLisp, VimL, ​​Lua, PHP နှင့် SQL ၏ကွဲပြားခြားနားသောအကောင်အထည်ဖော်မှုစသည့်ဘာသာစကားများစွာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Emacs နှင့်အတူပရိုဂရမ်းမင်း၏ဘုရင်များဖြစ်သော vim / neovim နှင့်အတူအားလုံး။ သူတို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကစတင်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းမရှိသေးပါ။ အရည်အသွေးအရ၊ Microsoft ၏ VSCode သာလျှင်သူတို့နှင့်အနီးကပ်ချဉ်းကပ်ပြီး C # ဖြင့်ရိုက်သည်။ (အကယ်၍ သင်က C # တွင်ပရိုဂရမ်ရေးသည်ဆိုပါကသင်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ) သို့သော်အခြားဘာမျှမရှိပါ။ Atom နှင့် ST3 သည်နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်။ ပြီးတော့ nano ကိုအယ်ဒီတာရုံမကပြောစရာမလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအရာရာတိုင်းကိုလုံးဝမပြည့်စုံပါဘူး။ xD
မင်း .vimrc ကိုဝေမျှမလား
မင်းရဲ့ဆောင်းပါးကိုတကယ်ကြိုက်တယ် အလွန်ပြည့်စုံသော IDE ဖြစ်သောလာဇရုကို (Delphians / Pascalians ဟောင်းများအတွက်) ထားရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏အတွေးများကို Linux ပရိသတ်များအားဝေမျှပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
robot tower အားပြန်ကြားပါ
ငါသိ၏။ ထိုသို့မဟုတ်ကြောင်း၊ အခြားစာပေများတွင်စာရေးသူအားလုံးသည်သူတို့၏အမည်များကိုရေးသည်၊ သို့သော်ဤနေရာတွင်“ Ing ။ ဟိုဆေးအဲလ်ဘတ်»« Ing ။ » "အင်ဂျင်နီယာ" သည်အလွန် egocentric ကိုဖတ်ရှုသည်သို့မဟုတ်သင်အလေးအနက်ထားရန်လိုအပ်သည်ဟုရေးသားရန်လိုသည်။ xD
မင်းရဲ့ပြproblemနာကိုငါပြီးသွားပြီ မင်္ဂလာပါ၊ ကံနှင့်အောင်မြင်မှု။
URxvt ၏တုံ့ပြန်မှုကိုဖြည့်စွက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အား Stack Overflow Developer Survey 2016 ကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ Linux Platform သည် Developer များ၏အကြိုက်ဆုံးအဖြစ် ၂၁.၇% ဖြင့်တတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ ပိုမိုရှာဖွေခြင်း, ဆိုလိုသည်မှာ Stack Overflow Developer Survey3နှင့် Stack Overflow Developer Survey ၂၀၁၈ ကိုရှာဖွေခြင်း၊ Linux Platform သည် ၂၇.၂% အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်တတိယနေရာတွင်ရှိနေပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ရန် ၄၈.၃% အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။ 21,7 ဘို့ 2017st ရာအရပျ၌။
ဤသည်မှာသင်လုံးဝမှန်ကန်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ Linux Platform သည်ကမ္ဘာကျော် ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်စစ်တမ်းအရကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ဆော့ဝဲလ်တီထွင်သူများ၏လည်ပတ်ရေးစနစ်များ၏ဘုရင်ဖြစ်သည်။
Diego de la Vega သည် Lazarus ကိုဤစာစောင်တွင်ထည့်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့မှသာဤကဲ့သို့သောအသုံးဝင်သော IDE ကိုထောက်ခံချက်များအတွင်းမထားရှိနိုင်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါစစ်တမ်းမှာမဲအရေအတွက်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် GNU / Linux, Windows၊ Mac ရဲ့အရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီအချိန်ကစပြီးသူကလူကြိုက်များတဲ့မှားယွင်းမှုထဲရောက်နေတယ်၊ လူအများစု ", ထိုစံပြ" သူ X ကိုသို့မဟုတ် Y အကြောင်းပြချက်များအတွက်ဘုရင်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုပြောပါလိမ့်မယ်သောအခါ, သောသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူအငြင်းပွားမှုဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၇ နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် developer များအကြား GNU / Linux အသုံးပြုမှုတိုးပွားလာခြင်းသည် developer များအနေဖြင့်၎င်းင်းတို့၏အားသာချက်များကိုရရှိစေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြခြင်းသာဖြစ်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ ဒါတွေအားလုံးကကျွန်မကိုအံ့အားသင့်စေတယ်။ Emacs သည်သမိုင်းတွင်ပထမဆုံး GNU application ဖြစ်သော်လည်း ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ကျော်ကြားသော org-mode၊ သို့မဟုတ် git (magit) ကဲ့သို့သောသင်၏ plugin ပင်လျှင်များစွာတတ်နိုင်သည်။ ရှာ။
Vim သည် Vi တိုးတက်လာသည်။ ၎င်း၏နှစ်များလည်းရှိသေးသည်။ တိုးတက်မှုအမြောက်အများကိုထည့်သွင်းထားသော neovim လမ်းဆုံလမ်းခွ၏လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်၎င်းအားအသုံးပြုမှုကြီးထွားလာသည်ကိုငါသတိပြုမိသည်၊ ၎င်းသည် terminal အတွက်သာပရိုဂရမ်ဖြစ်သော်လည်းကြယ် ၂၇၀၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဂရပ်ဖစ် interface ကိုမပါဘဲ။
Spacemacs ဟုခေါ်သော Emacs distro သည်လူကြိုက်များလာသည်။ ၎င်းသည် Vim နှင့် Emacs အကြားပြည်ထောင်စုဖြစ်သည် (မည်သူကမဆိုပြုလုပ်နိုင်သည့်အဆင်အပြင်ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်သည်။ )
'Linux ricing' သည်လူကြိုက်များလာသည်။ ၎င်းသည် desktop ပတ်ဝန်းကျင်မရှိသည့် GNU / Linux ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည် (Gnome၊ XFCE၊ KDE၊ Mate၊ Unity၊ LXDE၊ LXQT၊ Enlightment၊ အနည်းဆုံး window manager များ (dwm, xmonad, awesome or i3wm သည်နောက်ဆုံးပေါ်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်) ။
ထိုအခါငါကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲပါပြီ။ ငါ Windows ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီ၊ ငါဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဒီဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားတဲ့ပရိုဂရမ်အားလုံးကိုသုံးပြီး vim / neovim နှင့်အတူ i3wm ဖြစ်လိမ့်မည် (ယခုသူတို့နီးပါးတူညီနေကြသည်), tmux, နှင့်ကြိုးစားနေ သက်သက်သက်သက်သာသာအတွက် terminal မှဖြစ်နိုင်သမျှအားလုံးကိုလုပ်ပါ။ ဤကဲ့သို့သောအတိုင်းအတာအထိ surfraw သည်ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင် configure လုပ်ထားသောဘရောက်ဇာနှင့်ဖွင့်လှစ်သောသတင်းအချက်အလက်ရာပေါင်းများစွာကိုရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုသည်၊ ကျွန်ုပ်အမှု၌ terminal တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ဂီတအတွက်: cmus ။ chat အတွက်: irssi သို့မဟုတ် weechat ။ bash ထက်တစ် ဦး ထက်ပိုသောပြည့်စုံ shell ကို: zsh ။
အထက်ဖော်ပြပါ application များ၌ကျွန်ုပ် vim navigation (h, j, k နှင့် l မြှားအစားမြှားများဖြင့်) ကိုအသုံးပြုနေသောအတိုင်းအတာအထိကျွန်ုပ်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို Chromium သို့မဟုတ် Firefox တွင်ကျွန်ုပ် သုံး၍ plugins များစွာနှင့်လည်းသုံးပါသည်။ သူတို့တွေနှစ်အတော်ကြာနေခဲ့ကြတာပါ၊ ကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တုန်းက cVim, VimFX, Vixen, QuantumVim စသည် အမှန်အားဖြင့်၊ vim ဖြင့်ဤလမ်းညွှန်သည် Emacs (မကောင်းသော mode)၊ Sublime Text (စပျစ်သီး)၊ Atom (plugins နှင့်)၊ VSCode (Qpl Creator) (JtBrains IDEs)၊ (ရွေးစရာများ) ...
ဤအရာအားလုံးသည်အလွန်စပ်စုသောကြောင့်၊ ၎င်းသည်ဟောင်းသို့မဟုတ်အတိတ်ကာလကအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်သွားပြီးအသစ်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များထွက်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပုံရသည်။ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးများမှာပိုမိုကျယ်ပြန့်သော၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ။ ရသော၊ ပလပ်ဂင်များပိုများလာ။ တိုတောင်းသောအရာများလုပ်နိုင်သောအရာများဖြစ်သည်။
၉၅ ခုနှစ်မှာငါဟာ Windows 95 ကိုအသုံးပြုနေပြီးမကြာခင်မှာပဲပရိုဂရမ်ရေးဖို့သင်ယူခဲ့တယ်။ ငါ GNU / Linux 95 ကိုမစတင်ခဲ့ဘူး၊ အပြောင်းအလဲကငါ့အတွက်အရမ်းကိုခက်ခဲတယ်၊ ငါ့ကိုကုန်ကျတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည် Vim ကိုသုံးနှစ်မသုံးခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ခန့်တွင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နည်းရှိရမယ်ထင်တယ်မဟုတ်လား။ ကောင်းပြီ၊ အရမ်းသိချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ xD ပြန်မသွားဘူးဒါမှမဟုတ်ရူးသွပ်တယ်
မှတ်တမ်းအတွက် Emacs သည် Vim ထက် ပို၍ လုပ်သည်၊ Vim သည် Emacs ပြုသမျှကိုမလုပ်နိုင်သော်လည်း Emacs သည်ကျွန်ုပ်တောင်းခံသည်ထက် ပို၍ လုပ်ဆောင်သည် (၎င်းသည် OS လိုပဲ) Vim သည် ၁၀၀% အယ်ဒီတာဖြစ်ရန်အာရုံစိုက်သည်။
အခြားကဲ့သို့ URxvt အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလှူငွေ။ သင်၏ GNU / Linux နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံသည်အလွန်ကောင်းသည်။ အခြားထုတ်ဝေမှုများသို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စာစောင်များမှအခြားမှတ်ချက်များမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထပ်မံပြောနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ သင့်မှာဘလော့ဂ်တစ်ခု (သို့) ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိပါသလား။
Onix နှင့် Petros ဟုသူကပြောသည်
Onix နဲ့ Petros xD တို့ကိုမတွေ့မချင်းကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးပါ။
Onix နှင့် Petros တို့အားပြန်ပြောပါ
dev faiber ဟုသူကပြောသည်
ငါ archlinux ကိုအရမ်းချစ်မြတ်နိုးပြီးအရင်ကသုံးခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာလွယ်ကူပြီးကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒီ post အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
LeoCAD - LEGO ပါသော CAD ဒီဇိုင်းအစီအစဉ်
OpenSUSE Tumbleweed သုံးစွဲသူများသည် LibreOffice 6.1, Mozilla Firefox 61 နှင့်အခြားစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုလက်ခံရရှိသည်။